के हो डेङ्गु ? यसबाट कसरी बच्ने ? « Khabar24Nepal
के हो डेङ्गु ? यसबाट कसरी बच्ने ?
साउन १६, काठमाडौं । डेङ्गु ज्वरो लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने रोग हो । एडिज इजिप्टाई जातको लामखुट्टेले डेङ्गुभएकालाई टोकेर अरुलाई टोकेमा यो रोग सर्दछ । यो रोग मुख्यतः स्त्रीजातिका एडिज लामखुट्टे कोे टोकाइबाट मानिसमा सर्ने गर्छ ।
यसमा चार प्रकारका डेङ्गु भाइरस हुन्छन । त्यो भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेपछि डेङ्गुज्वरो लाग्ने हो । पानी जम्ने ठाउँ, साना खाल्डाहरुमा सफा पानी धेरै दिनदेखि जमेर बसेको भए यस्ता ठाउँहरुमा यो लामखुट्टेले अण्डा पार्दछ । यो रोग लागेका ९७ प्रतिशतलाई सामान्य ज्वरोको रुपमा हुन्छ ।
यो रोगको तीनवटा चरणहरु देखिन्छ । क्लासिक डेङ्गुज्वरो, डेङ्गुहेमोरेजिक ज्वरो र डेङ्गुशक सिन्ड्रोम । क्लासिक डेङ्गुसामान्य प्रकारको डेङ्गुहो, यो आफै निको हुन्छ तर डेङ्गुहेमोरेजिक ज्वरो वा डेङ्गुसक सिन्ड्रोम भएको छ भने यसको सही र समयमै उपचार नगरे मृत्युसमेत हुन सक्छ ।
डेङ्गुले निम्त्याउने जोखिम
एक पटक डेङ्गुभै सकेको मानिसमा धेरै जोखिम हुन्छ ।
डेङ्गुबाट बच्ने उपाय
विश्वमा कोरोनाबाट १० लाखभन्दा बढी मानीसको मृत्यु
१६ वटा स्थानमा सिकाई केन्द्र सञ्चालन
दैलेखमा बालविवाह र बहुविवाह महिला अधिकारको प्रमुख बाधक